> Resource> Video> Olee otú iji Detuo DVD on OS X Mavericks
Ọ bụrụ na ị dị nnọọ kwalite ka OS X Mountain Odum, ị ga-ahụ gị DVD oyiri software anaghị arụ ọrụ. N'ihi na ndị na-achọ ndabere DVD (gụnyere iso faịlụ) ka ike mbanye, na diski ike, ma ọ bụ detuo a DVD diski ọhụrụ DVD diski on Mountain Odum, e nwere oké DVD copier maka Mountain odum maka gị nhọrọ.
Nke ahụ bụ Wondershare Video Converter Ultimate for Mac pụrụ inyere gị aka ime ka a oyiri nke DVD fim maka na nkwado ndabere na ọ fọrọ nke nta 1: 1 mma. Na ime ihe dị nnọọ mfe. Ugbu a, ka na-amalite ịmụta otú Detuo gị DVD nkiri na ike mbanye, na diski ike, ọbụna a ọhụrụ DVD diski na nke a oké DVD oyiri Mountain odum.
1 Ibu Ibu DVD a DVD copier Mountain Odum
Mbụ, fanye otu n'ime DVD discs na ị chọrọ, mgbe ahụ na-agba ọsọ ngwa a. Mgbe ị na-isi interface, ị ga-atọ dị iche iche nhọrọ: Ụka, ọkụ, na Download. Ka idetuo DVD maka nkwado ndabere na mpaghara, dị nnọọ na-aga "Ọkụ" taabụ> "Copy DVD" nhọrọ ke n'elu-n'akụkụ aka ekpe nke "Ọkụ" interface. Mgbe ahụ, dị nnọọ ịnyagharịa ka DVD mbanye ịdọrọ DVD akara ngosi na ngwa a. Ugbu a, gị DVD faịlụ a depụtara na ebi ndụ nke ngwa a.
2 Malite idetuo DVD on Mountain Odum
Na ala-nri akuku nke a na ngwa, ị nwere ike pịa "Ọkụ" akara ndabere DVD. Na-esonụ window, ị ga-ahụ na e nwere kpam kpam anọ mmepụta nhọrọ, "DVD Disc", "DVD nchekwa", ".dvdmedia" na "ISO File". Ị nwere ike họrọ onye ọ bụla n'ime usoro ndabere gị DVD faịlụ. Ka idetuo DVD ka ike mbanye ma ọ bụ diski ike, ị nwere ike họrọ ihe ọ bụla onye si atọ ikpeazụ nhọrọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ iṅomi a ọhụrụ DVD diski, dị nnọọ họrọ "DVD Disc", mgbe ahụ, fanye a ide DVD diski, aha gị ọhụrụ DVD, na see "Save".
Lee, nke a na ngwa na-amalite na idetuo DVD ka DVD, na ọganihu mmanya Ile. N'ezie, i nwere ike ka ọ na-agba ọsọ na ndabere, na mgbe ahụ nwere iko tii n'èzí ma ọ bụ nọgide na-eme ndị ọzọ ọrụ na gị Mac.
Ọzọ atụmatụ nye site na nke a DVD ndabere na ngwá ọrụ Mountain Odum
Edezi DVD faịlụ - akuku, ewepụtụ, bugharia, ịgbanwe video, tinye sobtaitel na watermark wdg Iji mee ndị a, dị nnọọ pịa "Dezie" na akara ngosi na n'akụkụ aka nri nke onye ọ bụla ihe mmanya ịbanye n'ime ya edezi interface.
Ọkụ video ka DVD -Burn niile ewu video formats ka DVD nchekwa, ISO oyiyi faịlụ, na DVD disk, gụnyere WMV, MOV, AVI, MP4, MTS, FLV na ndị ọzọ.
Tọghata DVD iche iche formats na ngwaọrụ -Backup gị DVD diski na-eme ka ha playable na kọmputa, obere mgbasa ozi ọkpụkpọ, ma ọ bụ ekwe ntị na ọ laa.
Free download DVD Copier Mountain odum (ikpe version):